शीतलहर र हुस्सुले विपन्नलाई सास्ती |
शीतलहर र हुस्सुले विपन्नलाई सास्ती
२०७६ पुष ६ गते, आईतवार , १२:१८ मा प्रकाशित
नेपालगञ्ज। बाँकेमा शीतलहर शुरु भएपछि जनजीवन कष्टकर भएको छ। चिसो हावासँगै पानीको मसिनो थोपा र बाक्लो हुस्सु लागेका कारण अत्यधिक चिसो बढेपछि सर्वसाधारण घरबाहिर निस्कनसमेत सकेका छैनन्। शीतलहर र हुस्सुका कारण विपन्नलाई सास्ती भएको छ। अघिल्लो साता परेको वर्षापछि अत्यधिक जाडो बढेको छ।
चिसोले बाँकेका अल्पसङ्ख्यक तथा विपन्न समुदाय सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। चिडिमार, घँसियार, मगन्ता, कुचबधिया लगायत गरीब समुदाय सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। फुसले छाएका कच्ची घर, लगाउने लुगा र ओढ्ने, ओछ्‌याउने नभएकाले यो समुदाय सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्।
चिसोले बिरामी, बालबालिका र वृद्धवृद्धा पनि प्रभावित भएका छन्। बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई चिसोबाट जोगाउने उपायबारे सचेत गराउन प्रशासनले सार्वजनिक हितका लागि सूचना जारी गरेको छ। बाँकेका प्रजिअ कुमारबहादुर खड्काले न्यानो कपडा र आगो ताप्नका लागि दाउराको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरिएको बताए।
‘‘नेपालगञ्ज, कोहलपुरलगायत जिल्लाका विभिन्न चोकमा आगो ताप्ने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहलाई भनेका छौँ,” उनले भने। चिसो हावामा पानीको मसिनो थोपा खस्ने गरेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, फिल्ड कार्यालय, नेपालगञ्जका प्रमुख पलबहादुर विश्वकर्माले गत मङ्गलबारदेखि शीतलहर शुरु भएको बताए।
अधिकतम र न्यूनतम तापक्रमको अन्तर घट्दा जाडोको महसुस बढी भएको उनको भनाइ छ। दिनभर चिसो सिरेटो चलेपछि महत्वपूर्ण काममा मात्र सर्वसाधारण बाहिर निस्कने गरेका छन्। नेपालगञ्ज–१९ का प्रमोद गिरीले चिसो हावा चलेर अत्यधिक ठण्डी बढेपछि घरबाहिर निस्कन नै नसकेको बताए।
चिसोले बिरामी, बालबालिका र वृद्घवृद्घालाई बढी समस्या भएको छ। मुटु, श्वासप्रश्वास, बाथरोगका बिरामीलाई समस्या भएको भेरी अञ्चल अस्पतालका मेडिसिन विभाग प्रमुख डा. राजन पाण्डेले बताए। उनले चिसोमा कोल्ड डाइरिया, निमोनियाँ, ज्वरो र रुघाखोकीको समस्या बढी देखिने बताए।
डा पाण्डेले अस्पतालमा चिसोका बिरामी बढ्न थालेको बताउँदै भने, “बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई न्यानो ठाउँमा राख्न एवं झोलिलो तथा तातो खान दिनुपर्छ।” कोल्ड डाइरिया, निमोनिया, ज्वरो र रुघाखोकीले सताउने हुँदा चिसोबाट जोगिन डा पाण्डेले सुझाव दिए।
शीतलहर शुरु भएसँगै डिभिजन वन कार्यालय, नेपालगञ्जले दाउरा वितरण शुरु गरेको छ। नेपालगञ्ज नगरका प्रत्येक परिवारलाई प्रतिकिलो रु सातका दरले एक क्विन्टल दाउरा प्रदान गरिएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख मोहन श्रेष्ठले बताए। नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा दाउरा वितरण गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
अघिल्लो सामाग्रीजहाँ स्वास्थ्यकर्मीले नै दिन्छन् बिरामीका लागि रगत
पछिल्लो सामाग्रीआहा! टिकोट अनि धौलागिरि हिमाल
प्रहरीको सर्वाधिक खोजीको सूचीमा रहेका ज्वाला सिंहले मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोमा बेचे जग्गा
आफैँ बिरामी भएको छ गुल्मीको जोहाङ स्वास्थ्यचौकी